Akụkọ - Nnyocha na-ekwu na ahịa modulu nyocha ga-akarị ijeri USD17.7 na 2025, yana onyinye kachasị na ebe data
“Ọnụ ahịa ahịa nke modulu ngwa anya na-erute ijeri USD7.7 ijeri na 2019, a na-atụ anya na ọ ga-akarị okpukpu abụọ na ihe dịka USD17.7 ijeri na 2025, yana CAGR (ọnụ ọgụgụ mmụba kwa afọ) nke 15% site na 2019 ruo 2025. ” Onye nyocha YoleD & Veloppement (Yole) Martin Vallo kwuru, sị: “Uto a eritela uru site na ndị na-arụ ọrụ igwe ojii buru ibu na-amalite iji nnukwu usoro dị oke ọnụ (gụnyere 400G na 800G) modul. Na mgbakwunye, ndị ọrụ telecom amụbawokwa ego ha na netwọkụ 5G. ”
Yole kwuru na site na 2019 ruo 2025, ọchịchọ maka modulu anya site na ahịa nkwukọrịta data ga-enweta CAGR (ọnụ ọgụgụ mmụba kwa afọ) nke ihe dịka 20%. N'ahịa ahịa nkwukọrịta, ọ ga - enweta CAGR (ọnụ ọgụgụ mmụba kwa afọ) nke ihe dịka 5%. Tụkwasị na nke a, site na mmetụta nke ọrịa a, a na-atụ anya na ego a ga-enweta ga-abawanye n'ụzọ kwesịrị ekwesị na 2020. N'ezie, COVID-19 emetụtala ahịa nke usoro modulu ụwa. Agbanyeghị, na ebumnuche nke ntinye 5G na igwe ojii data center development development, ịchọrọ maka modulu ngwa anya siri ike.
Dị ka Pars Mukish si kwuo, onye nyocha na Yole: “N'ime afọ 25 gara aga, mmepe nke teknụzụ nkwukọrịta ngwa anya nwere nnukwu ọganiihu. Na 1990s, ikike kachasị nke njikọ njiri anya ngwa ahịa bụ naanị 2.5-10Gb / s, ma ugbu a ọsọ ọsọ ha nwere ike iru 800Gb / s. Ihe mmepe n'ime afọ iri gara aga emeela ka usoro nkwukọrịta dijitalụ dị elu rụọ ọrụ nke ọma wee dozie nsogbu nke mgbaàmà mgbaàmà. ”
Yole kwuru na mmalite nke ọtụtụ teknụzụ enyerela ọsọ ọsọ nke ntanetị dị ogologo na metro iji ruo 400G ma ọ bụ karịa karịa. Omume taa na ọnụego 400G sitere na ndị na-ahụ maka igwe ojii na-achọ njikọrịta data. Tụkwasị na nke ahụ, mmụba nke ikike netwọk nkwukọrịta na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ọdụ ụgbọ mmiri anya nwere mmetụta dị ukwuu na teknụzụ modul optical. Ọhụrụ ụdị ihe eji emepụta ihe na-adịwanye njọ, na-achọkwa iwelata nha ya, si otú a belata ike oriri. N’ime modul ahụ, ngwa anya na ihe ikuku na - arụ ọrụ na - abịarukwu nso.
Ya mere, silicon photonics nwere ike ịbụ isi teknụzụ maka ọdịnihu njikọta ihe iji nagide ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu. Teknụzụ a ga-arụ ọrụ dị mkpa na ngwa sitere na 500 mita ruo kilomita 80. Industrylọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ iji jikọta lasers InP ozugbo na mkpụrụ osisi silicon iji nweta njikọta dị iche iche. Uru ya bụ nhazigharị nke mkpokọta na mkpochapu ụgwọ na mgbagwoju anya nke ngwa anya.
Dr. Eric Mounier, onye nyocha na Yole, kwuru, sị: “Na mgbakwunye na ịbawanye ọnụego site na amplifiers jikọrọ ọnụ, a ga-enwekwa ike ịnweta data dị elu site na ijikọta mgbawa ndị na-arụ ọrụ mgbaàmà dijitalụ kachasị elu, nke na-enye teknụzụ mgbanwe dị iche iche dị iche iche, dị ka dị ka PAM4 Ma ọ bụ QAM. Usoro ọzọ iji mee ka ọnụ ọgụgụ data dịkwuo elu bụ njikọta ma ọ bụ ịba ụba. ”
Post oge: Jun-30-2020